Sakafo homemade | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Sakafo homemade
Ny fampiasana salady iceberg: ny tombony sy ny fanimbana ny vatan'olombelona
Inona ny salady iceberg, anio, angamba, fantatry ny rehetra. Ity karazana salady izay mijery (na dia rehefa tapaka) dia mitovy amin'ny karazana fotsy fotsy. Ny ravina dia mamy sy marefo (nandritra ny fotoana lava dia nantsoina hoe "tavy" ny salady). Ampiasaina indrindra ho an'ny fototry ny fanomanana ny salady, ary koa vitaminina fanampiny amin'ny sakafo hafa sy ny sakafo maina.
Ny fampiasana sira noforonina: ny toetra mahasoa sy ny fanoherana
Ny toeran'ny maple dia tsy malaza tahaka ny birch. Na izany aza, noho ny isan'ireo trano ilaina, dia tsy ambany noho ny tenany izy. Any amin'ireo faritra any Amerika Avaratra, ity firenena ity dia misotro ary mamokatra amin'ny sehatra indostrialy. Ao amin'ilay lahatsoratra dia hijery ny atao hoe maple saap, ahoana ny mahasoa, ny fomba fanangonana maple skip ary inona no azo atao amin'izany.
Ny zava-drehetra momba ny toetra mahasoa sy manimba ny voninkazo
Eggplant (lat. Solánum melongéna) dia manondro ny zavamaniry ahi-pandehan'ny taovam-pananan'ny Bleeding. Ny tanindrazany dia India, Azia ary Moyen Orient. Eo andalambe, ny voankazo dia manana loko volomparasy ary mbola mitobaka ao India, hita any Birmania. Ny zavamaniry mitovy amin'ny voankazo madinika dia ao Shina. Amin'ny maha-kolontsaina azy efa fantatra ela.
Ahoana no mahasoa ny tantely amin'ny kesika?
Misaotra ireo zavatra mahasoa izay navoaka tao anaty ala kesika, azonao atao tsara ny manasitrana ny vatana. Ny fanafody fanasitranana dia mavitrika tokoa mavitrika amin'ny lohataona, saingy tsy ny rehetra no afaka mitsidika ny ala amin'izao fotoana izao. Saingy amin'izao fotoana izao, misy ny fahafahana hahazo ny tombontsoa be indrindra na dia ao an-trano ihany aza, mampiasa tantely fotsiny avy amin'ny kesika na kesika, izay feno sata be dia be amin'ny zavatra tena ilaina.
Miaro ny pastèka any amin'ny banky mandritra ny ririnina
Ny ravin-kafe dia taho malaza izay manome mamy sy hamamoana amin'ny fahavaratra. Tena manankarena amin'ny vitamina, microelements ary zavatra hafa mahasoa ny olombelona. Inona anefa no hatao raha efa tonga ny ririnina, ary tsy misy "tsena"? Amin'ity lahatsoratra ity dia hanoro anareo ny fomba hanomanana ny pastèma voamaina amina banky mandritra ny ririnina, mba hahafahan'izy ireo mamoaka tsiro sy salama.
Recipe ho an'ny divay namboarina namboarina
Indraindray dia ampiasain'ny divay vita amin'ny voaloboka. Amin'ny ratsy indrindra - avy amin'ny paoma. Saingy fantatry ny Aziatika fa io no poire izay manome fahendrena, fahasalamana ary faharetana. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia mamaritra ny fomba hanamboarana divay ao an-trano miaraka amin'ny fomba tsotra. Fifantenana sy fikarakarana ploughs Manomboka manomana divay, mazava ho azy, ilaina ny manomana ilay fitaovana ho an'izany.
Manomana kavina mamy ho an'ny ririnina izahay
Mahafinaritra ny ririnina ririnina mangatsiaka mba hankafizanao ny tsiron'ny fahavaratra ankafizinao. Mba hanaovana izany dia mila miasa kely ianao mandritra ny vanim-potoana mamirifiry kiriodana mamy. Fitaovana sy fitaovana fitehirizam-bary Mba hanakanana ny kiriodana kiriodana mandritra ny ririnina, ny mpivady dia mila kobam-boly madinidinika izay ahafahanao manondraka rano, boasary goavana iray mba hanamafisana ny siny, fitehirizana fiarovana, plastika plastika miaraka amin'ny lavaka mba handroana rano, mizana, ary sotro.
Sakafom-bary amoron-dranomasina: ny zavatra misy, inona no ilaina, ny fomba atao sy ny fakana, na azo atao izany mandritra ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana
Ny tsikirikirioka ny ranomasina dia kolontsaina miavaka amin'ny voankazo amber amber. Ary ny ravina, ny voankazo ary ny fakany sy ny hodi-kazo dia manana hery hanamaivanana ny aretina. Ary ny ranom-boankazo masira dia salama, matsiro ary manasitrana. Ny zavatra hita ao anatin'io endriny io Ny firafitry ny voankazo masira amoron-dranomasina dia ahitana ny vitaminina mahazatra, ny mineraly tsara rehetra, ny aserôka ara-organika, ny tanin-jiro, ny antibiotika voajanahary, ny pactine, ny serotonine, ny flavonoids.
Karazana voankazo voaloboka fotsy sy voankazo homemade
Ny fotoam-pambolena dia efa lasa anisan'ny toetra tsy azo ivalozana amin'ny trano fonenana na kianja tsara tarehy. Ao amin'ny latabatra, dia afaka mahita ireo karazan-tsakafo maro samihafa ianao, fa ao anatin'izy ireo kosa dia ireo tsipika izay manome voankazo faran'izay mamy. Ny raozy fotsy malaza dia azy ireo. Andao hianatra ny fomba hanamboarana ravina matsiro avy amin'ny voankazo. Fotoana fohy momba ny voaloboka. Ny ravina fotsy dia karazana voaloboka mamy miaraka amin'ny voany kely na tsy misy azy ireo (noho izany tsy misy rajako masaka amin'ny natiora).
Ahoana ny fomba hampiasana akoram-boaniho ho an'ny kafe
Maro amintsika no manomboka ny andro iainantsika amin'ny fombafomba toy izany: misotro kafe aromatika sy tonika. Saingy, indrisy fa tsy ny olon-drehetra no afaka mandoa izany noho ny olana amin'ny tosidra. Hitanao fa misy safidy tsara amin'ny fisotroan-drivotra - kafe kafe. Ny fomba handrahoana azy - ity dia hodinihina ao amin'ny lahatsoratra.
Inona no japoney japoney mahasoa. Fomba hisafidianana voankazo sy voankazo mahasoa
Hatramin'ny andro fahiny, ny olombelona dia mahafantatra ny toetra mahasoa ny ampongabendanitra. Na i Hippocrates aza dia nampiasa io voankazo io ho fitsaboana aretina isan-karazany. Amin'izao fotoana izao, ny ampongabendanitra dia tsy namoy ny maha-zava-dehibe azy, fa, raha ny marina, dia mitombo fotsiny, satria misy zavatra maro mahasoa. Ny fikarakarana manokana dia atolotra ny sokatra amin'ireto taolana ireto, izay hifanakalozantsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Ahoana ny fomba ahandroana siramamy ahitra, ary ahoana no mahasoa azy
Androany, ny siramazo maple dia nahazo laza fa solo-tena voajanahary voajanahary. Ny tavoahangy misy ranom-boankazo mamy dia hita any amin'ny lakozia rehetra, mpanohana ny sakafo ara-pahasalamana ary ireo izay mikasa ny handraraka pounds fanampiny. Heverina fa ity vokatra marefo ity dia manome ny vatana amin'ny singa tena ilaina ary manampy amin'ny fahasalamana.
Inona no ambolena voajanahary tsara ho an'ny vehivavy?
Ireo karazana masom-boly ireo dia manana fombafomba miavaka ary manana fiantraikany goavambe eo amin'ny vatan'ny vehivavy. Ny hasarobidin'ny vokatra dia voafaritra amin'ny fisian'ny voka-dratsin'ny zavamaniry sy ny mikraoba. Amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminareo izahay hoe maninona no mahasoa ity fahasalamana ity ho an'ny fahasalaman'ny vehivavy iray. Ny tsirony sy ny toetrany Ny voan'ny masomboly mavomavo dia mamafy voan'ny masom-boly isan-taona isan-taona, izay hita ao anaty sobika lehibe izay misy felana mavo mangamanga.
Ny fitsaboana tsara indrindra ny feijoa
Ao amin'ny faritra misy anay, feijoa dia exotus. Io voankazo tsy mahazatra io dia manandrana mitovitovy amin'ny kiwi, anana ary ny matsiro. Mampiasaina betsaka amin'ny sakafo izy io, manamboatra karazan-tsakafo isan-karazany: menaka, mofomamy, salady. Maro no nampifanaraka ny fanaovana feijoa tincture. Io zava-pisotro io dia tsy misy afa-tsy ny fofona mahafinaritra, fa ny toetra ilaina ihany koa.
Ahoana no hanamboarana salopeana salady Koreana mandritra ny ririnina ao an-trano?
Mahafantatra ny karaoty Koreana ny tsirairay - efa ela no nahalalan'ny olona izany. Tsy dia fantatra loatra ny ziaka Koreana, na dia tsy misy tsiranoka miavaka aza izany salady voatahiry izany. Ity ambany ity ny fomba fanomanana azy. Ireo toetra mampiavaka Ny tsiron-tsakafo, ny zakiny sy ny karaoty dia manan-kery, manasongadina ny haavon'ny tsiron-tsakafo, ary ny tongolobe sy ny tsikirity mafana no manome azy ny fahamendrehana sy ny pikantsary.
Ahoana ny fomba hanomanana ny fanangonana fimailo amin'ny vodka sy ny fomba ilàna azy
Fanafody mahatalanjona sy zava-pisotro mahasalama mahafinaritra - tolo-koditra vita amin'ny sela. Ny ranon-tsakafo matsiro sy malefaka dia afaka manindrona tsimoramora tsikelikely amin'ny takarivan'ny ririnina, mampahatsiahy ny fahavaratra mafana. Ary iray amin'ireo tombony ao aminy dia tsy sarotra ny manao zava-pisotro toy izany. Inona no dikan'ny tsiranoka amin'ny plum Tsy mieritreritra an'izany tingkiora vita amin'ny vodka sy fimailo izany - zava-pisotro misy alikaola fotsiny.
Ahoana ny fomba fanaovana tkemali amin'ny teny Zeorziana: dingana isan-karazany
Tkemali dia saosy goavy Georgiana mahasalama miaraka amin'ny lovia vy. Momba ny fanomanana azy araka ny fomba mahazatra mahazatra, sy ny fanomanana ny fanangonam-bokatra ho an'ny ririnina, dia horesahina ato amin'ity lahatsoratra ity. Inona no ilainao hanangom-bolo Mba hanomanana ny saosy, dia mila tkemali (karazana plum) izy, mena na mavo.
Fomba fanatsarana tsotra 5 fanasan-damba mainty (mainty na mainty mainty)
Chokeberry, chokeberry, ashberry mainty dia tsaramaso mahasoa izay ahitana karazana sarobidy maro ho an'ny olona, ​​indrindra ny vitaminina C sy P, asidra organika, saka, iodine. Heverina ho karazana aretin-tsaina izy. Ho an'ny fitsaboana sy ny fisorohana ny aretina isan-karazany, ny tinctures dia matetika ampiasaina. Hilaza aminareo momba ny tombontsoa azo avy amin'ny tinkitr'ity berry ity, noho ny aretina ampiasaina sy ny fomba hanomanana izany - eto ambany.
Sakafo ho an'ny voankazo mamy amin'ny moonshine
Amin'ny vanim-potoanan'ny fararano sy ririnina, ny vatan'olombelona dia matetika iharan'ny tsy fahampian-tsakafo vitamina, mihena ny hery fiarovan-tenany, ary ny olona dia mety ho voan'ny aretina isan-karazany sy ny areti-mifindra. Raha ny lohataona sy ny lohataona dia misy fotoana hanamafisana orina ny vatana amin'ny fanampian'ny loharano vitaminina vaovao, dia amin'ny fararano amin'ny fararano sy ny ririnina dia azonao ampiasaina ho an'io tanjona voajanahary voajanahary io - ny alikaola na ny toetrany.
Ny fomba mahazatra tsara indrindra amin'ny fanaovana liqueurs avy amin'ny po, na ny fomba fanaovana pancake
Plum liqueur - zava-pisotro mamy sy mamy. Ny anarany dia mitondra zavatra mampihomehy, tokantrano ary mahazendana. Tsy zava-pisotro lehibe ho an'ny chat mahafinaritra izany, fa koa fotoana iray hanampiana ireo vahiny. Ankoatra izany, ny fitsaboana dia fitsaboana tsara indrindra izay manampy amin'ny aretina maro.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Sakafo homemade